शालीकराम पुडासैनी आ*त्महत्या प्रकरणमा फेरि अर्को खु*लासा – PanchKhal Online
Home/समाचार/शालीकराम पुडासैनी आ*त्महत्या प्रकरणमा फेरि अर्को खु*लासा
काठमाडौं – चितवनको कंगारु होटलमा झु*न्डिएको अवस्थामा मृ*त भेटिएका माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले ‘गलफ्रेन्ड’सँग भे*ट्न छुट्टै कोठा लिएको नयाँ तथ्य भेटिएको छ। श्रीमती सम्झना घिमिरेसँग बालाजु माछापोखरीमा कोठा लिएर बस्ने पुडासैनीले बि*दा र फुर्सदको समयमा प्रेमिकालाई भे*ट्न टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ महादेवटारकी गोमा न्यौपानेको घरमा कोठा भाडामा लिएको फे*ला परेको हो।महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले पुडासैनीको कोठाबाट पुडासैनी र उनकी प्रेमिकाको फोटोसहित केही कागजात ब*रामद गरेको छ।
प्रहरीले टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष उत्तम अधिकारीको रो*बहरमा गत बिहीबार कोठा खोलेर खा*नतलासी गरेको थियो। पुडासैनीले एकजना केटीसँग खिचेको फोटो, लालपुर्जा, सेयर प्रमाणपत्र, सुन किनेको बिललगायत सामग्री ब*रामद गरेको रो*बहरमा बसेका वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए।‘प्रहरीले खबर गरेपछि गएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘कोठामा पुडासैनीसहित एक केटीको फोटोसहितका कागजात प्रहरीले ब*रामद गरेको छ।’ प्रहरीले उक्त फोटो पुडासैनीले आ*रोप लगाएकी अस्मिता कार्कीको हो या अन्य कसैको हो, खुलाउन चाहेन।
महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी उत्तम सुवेदीले अ*नुसन्धानमा रहेको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए। ‘अ*नुसन्धान सकिएपछि सबै विषय प्र*स्ट बाहिर आउँछ,’ सुवेदीले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई मिडियाले पनि बाहिर नल्याउँदा राम्रो।’श्रीमती सम्झना घिमिरेसँग बालाजु माछापोखरीमा कोठा लिएर बस्ने पुडासैनीले बि*दा र फुर्सदको समयमा प्रेमिकालाई भे*ट्न टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ महादेवटारमा कोठा लिएको खुलेको छ।पुडासैनी मृ*त्युको खबर सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएपछि घरधनीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। गत बिहीबार प्रहरीले उक्त कोठा खोलेर केही सामान ब*रामद गरेको हो।
पुडासैनीले गत फागुनदेखि उक्त घरमा कोठा भाडामा लिएको घरधनी न्यौपानेले बताइन्। पुडासैनी राति बस्ने नभएर दिउँसोमा त्यहाँ पुग्ने गरेका थिए। ‘शनिबारको दिन दिउँसोमा एकजना केटी लिएर एकदुई हप्तामा आउनुहुन्थ्यो,’ नौपानेले शनिबार नागरिकसँग भनिन्, ‘केटी को हो भन्ने थाहा भएन।’ पुडासैनीले भाडा लिएको कोठा घरको भुइँतलामा छ। कोठाभित्र पसेर निस्केको पनि उपल्लो तलामा बस्ने घरधनीले धेरै थाहा पाउँदैनन्।पुडासैनीले कोठा भाडामा लिँदा आफू कलेज पढ्ने र काम गर्ने भएकाले कहिलेकाहीं बस्ने बताएका थिए। पछि घरधनीले पत्रकार भएको थाहा पाएका थिए।
कोठा खोज्न पुडासैनी एकजना केटी लिएर आएको न्यौपानेले बताइन्। ‘कोठा खोज्न आउँदा एकजना केटी साथी थिई,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘को हो, सोधिएन।’ कोठा खाली भएकाले भाडामा दिएको उनले बताइन्। पुडासैनीले दुई महिनादेखिको भाडासमेत ति*र्न बाँकी छ। उनले प्रतिमहिना चार हजार रुपैयाँ ति*र्दै आएका थिए। गलफ्रेन्ड भेट्न भाडामा कोठा लिएको विषय प्रहरीले बाहिर ल्याएको छैन।पुडासैनीले न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र ओखलढुंगा घर भई काठमाडौंमा बस्ने अस्मिता कार्कीका कारण आफू आ*त्मह*त्या गर्न बाध्य भएको आरोप लगाउँदै गरेको भिडियो रेकर्ड उनको मृ*त्युपछि सार्वजनिक भएको थियो।
लामिछाने, कँडेल र कार्की अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हि*रासतमा छन्। मु*लुकी अ*पराध संहिता ऐन २०७४ को भाग २ परिच्छेद १२ अनुसार आ*त्मह*त्या गर्न दु*रुत्साहन गरेको आ*रोपमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।पत्रकार पुडासैनीको मृ*त्यु, लामिछाने र कँडेल पक्राउ परेको विषयलाई लिएर अहिले सडकदेखि सदनसम्म ब*हस भइरहेको छ। लामिछानेका समर्थकले उनलाई फ*साउन लागेको भनेर सडक आ*न्दोलनमा छन्। उता प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेले आफू अ*सुरक्षित रहेको पत्रकार टेकनारायण भट्टराईसँगको भेटमा बताएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ।
प्रहरीले पुडासैनी र अस्मिताबीच भएका फेसबुक तथा एसएमएस सं*वाद पनि अ*ध्ययन गरिरहेको छ।घ*टनाको अ*नुसन्धान भइरहेको बेला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि चितवन पुगेर भे*टघाट गरेका छन्। लामिछानेले आफू अ*सुरक्षित भएको बताएको सार्वजनिक भएपछि खनालले भेटेका हुन्।नागरिक दैनिक बाट